Faallo: Dagaalka Qabow ee Geeska Afrika – Puntland Post
Posted on December 1, 2018 December 4, 2018 by Liban Yusuf
Faallo: Dagaalka Qabow ee Geeska Afrika
Tan iyo xilligii la furay kanaalka Suweys sanadkii 1869 kii, manddiqadda geeska Afrika waxa ay lahayd ahmiyad gooniya. Waddammadii maal galinta kanaalka iska lahaa oo ahaa boqortooyadii Ingiriis ka iyo Faransiis kuba waxa ay markiiba bilaabeen sidii ay marinka kanaalka u hanan lahaayeen. Kuwaas oo saldhigyo ciidan ka samaystay marsooyinka Cadan iyo Tojora.
Si’ay u sugto amaanka Niilka iyo kanaalka Suways, dawladdii Mohamed Ali ee ka talinaysey Masar iyana sidaas oo kale ayay lahayd damac dhulballaarsi. Waxa ayna dawladdii Turkida kala wareegtay xeebihii Eritrea iyo Soomaaliya. Aakhirkiina loolan kaan waxaa ku guulaystey waddammadii gumaystihii reer Yurub oo iyagu kala qaatay marsooyin kii marinka badda cas iyo gacanka cadmeed.
LOOLANKII QUWADIHII WAAWAYNAA IYO GEESKA AFRIKA.
Kolkii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunidu, caalamku waxa uu u kala baxay labo xero oo uu ka dhaxeeyey tartan iyo xifaaltan siyaasadeed. Waa labo xero oo ku kala gadisanaa aragtida siyaasadda, dhaqaalaha, dhaqanka iyo diintaba. Waa xeradii reer galbeedka hanti-goosigaa iyo tii reer barigii hanti-wadaaga ahaa.
Dal walba oo xoriyaddiisa helaba waxaa looga gacan haatinayey xero ka mida labadii xero ee uu tartanku ka dhexeeyey. Sidaas ayaana dagaalkii qaboobaa uu caalamkii ugu fiday. Dagaalkani meelaha uu ugaxda dhigay ayuu geeska Afrika ka mid ahaa. Dagaalkii qaboobaa ee ay quwadihii waawaynaa isku hayeen, waxa uu dagaal kulul ku noqday kuwii yaryaraa ee lagu dirirayey, waxa uuna aakhirkii meesha ka saaray dawladnimadii Soomaalida.
AFARTAN SANO KABACDI IYO DAGAAL KALE OO QABOW
Afartan sano ka bacdi mar kale ayaynu arkaynaa loolan xoog badan oo mar kale geeska ka aloosan. Iminka waxaa is haya tobannaan quwadood oo kala masaalix iyo aragtiya. Intooda badani waxa ay ku yimaadeen dagaalkii burcad badeedda. Kuwo kalana waxa ay la socdeen gugii carbeed. Kuwana waxa ay dagaal kula jiraan kuwo kale oo geeska saamayn ku leh.
Sida Sacuudiga iyo Iiraan, Imaaraadka iyo Qadar. Masar iyo Ethiopia. China iyo Maraykanka. Eritrea Iyo Jabuuti. Turkida iyo Emaaraadka. Sudan iyo Maraykanka. Emaaraadka iyo Jabuuti iyo Soomaaliya iyo maamulladeeda. Su’aasha muhiimka ah ayaase ah maxaa laysku hayaa? Jawaabtu waa in laysku hayo dano dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed.
Wixii ka dambeeyey gugii carbeed waxaa jiray cabsi aad u xoog badan oo soo wajahday dawladaha khaliijka gaar ahaan Emaraadka iyo Sucuudiga. Waxa ay cabsi xoogan ka qabaan shucuubtooda, gaar ahaan islaamka siyaasigaa. Waxay garawsan yihiin kacaanadu in aysan dhakhso u dhiman. Sidaas daraadeed mar ay ahaataba dabku inuu iyaga soo gaari doono ayay qabaan. Waxaa gobolka ku sugan Turkiya iyo Qadar oo labaduba ahaa mashiinkii riixayey gugii carbeed. Inta labadaasi ay gobalka joogaana, xulufada Sacuudiga fadhi uma yaal.
Dhanka kalana tan iyo markii uu Turkigu soo galay masraxa siyaasadda Soomaalida waxaa jirey walaac sii kordhayey oo ay qabaan dawladaha reer galbeedku, laakiin shakigaasi waxa uu sii kordhay kolkii Turkidu ay saldhigga milateri ka heshay Soomaaliya. Mid kaa la midana ay la saxiixatay dalka Sudan oo lagu guddoon siiyey marsada Zawakin.
Toddobadii Febaraayo, maalin ka hor doorashadii madaxwayne Farmaajo, wargayska afka dheer ee New York Times waxa uu qoray maqaal dheer oo ku saabsanaa kala gadashada cododka iyo saamaynta shisheeyaha. Waxaa indhahayga soo jiitay kolkii uu Sudan ku soo daray qolyaha saamaynta ku leh Soomaalida. Wuxuu yiri “Sudan ayaa iyaduna wadata dadkeeda maxaa yeelay waxa ay rabtaa inay cid ku yeelato sirdoonka Soomaalida oo ay CIA wada shaqeeyaan, si ay u hesho xogta Maraykanka ee gobalka“Cajiib! marna ma is waydiisay sababta ay boqolaal Soomaaliya oo Sudan wax ku soo bartay ay jagooyin sarsare uga qabtaan dalka?
Dagaalka biyaha ee u dhaxeeya Masar iyo Ethiopia ayaa isna ah mushkilad aan xal lahayn. Shakiga Ethiopia ee ku wajahan saldhigyada Emaaraadkuna wali waa taagan yahay, xitaa iyaga oo iminka aad isugu dhow. Maxaa yeelay ethiopia ayaa shaki ka qabta Masaarida oo xiriir dhaw la leh Emaaraadka.
Dhawr sano ka hor ayay ahayd markii Anwar Cishqi oo ahaa lataliye hore ee boqortooyada Sacuudiga iyo Janaraal hore oo sirdoon, uu Isra’il uga dhawaaqay inay jirto khidad la doonayo in geeska Afrika hal dawlad oo Ethiopia madax u tahay loo sameeyo, si looga faa’iidaysto khayraadka gobalka. Markii waxaa loo arkayey nin riyoonaya, laakiin iminka waxa uu u egyahay nin xaqiiq ku hadlayey.
Dhanka kalana waxaa jira isbalaarin xoog badan oo Emaaraadku ka wado gobalka ka gadaal intii heshiisku uu dhex maray Shiinaha iyo Jabuuti kaas oo sababay in Emaaraadka laga saaro dakadda Dooraale ee Jabuuti. Wixii ka dambeeyay bilowgii murankaan 2012 Emaaraadku waxa uu boos celis u qabsaday marsooyinka Casab, Suqaddara, Berbera, Bosaso iyo Mukala.
Turkiya ayaa iyana leh dano dhaqaale oo ku saabsan mustaqbalka fog, waxa ugu wayn oo ay danaynayso ayaana ah maalgalin ay ku samaysato khayraadka dabiicigaa oo ay baahi wayn u qabto.
Gacanka ciriiryoon ee Hormuz oo ay marto in ku dhow 40% saliidda caalamka ayaa waxa uu gacanta ugu jiraa dalka Iran. Dhawr goor oo hore ayayna ku hanjabeen inay xirayaan. Sacuudiga iyo xulufadiisa ayaa waxaa dhabar-jab ku noqotay kolkii xuutiyiinta oo ay taageeraan Iran ay la wareegtay marsada Xudeyda oo kulaalaysa marinka kele ee isna muhiimkaa ee Baabul Mandab. Taas oo muhiimad gooniya siisay saldhigyada cusub ee xulufadu gobalka ka hir gasheen.
SHIINAHA WAA LA SHARAYSTAY
Kolkii aad fiiriso daruufaha gobalka ka jira iyo tillaabooyinka Abiye Ahmed waxaa kuu soo baxaya in baabuurka uusan kaligiis wadin ee lala wado. Raysal wasaare Abiye illaa iminka malahan siyaasad hufan oo ku wajahan arimaha gudaha ee dalkiisa, laakiin taas badelkeeda waxa uu leeyahay siyaasad dibadeed oo geeska midaynaysa. Haddaba sidee ayay labadaasi isu yeelayaan? Kolkii ugu horaysay ee raysal wazaaraha la magacaabayba Emaaraadku waxa ay ugu deeqeen saddex bilyan oo dollar oo deeq iyo dayn isugu jirta. Laguna kabayo dakhliga Ethiopia. Sidoo kalana Emaaraadku waxa ay sheegeen in ay iyaga ahaayeen cidda iska lahayd hindisaha heshiiska Eritrea. Haddaba si aynu u fahano biya dhaca sheekada waa in aynu dib u jaleec naa siyaasaddii EPRDF ee dalka lagu dhaqayey.
Ethiopiadii Malas Sinawi, waxa ay kamid ahayd dhawr wadan oo Afrikaana sida Ruwanda iyo Uganda oo uu ka taliyo hal xisbi ayna cajabisay dhaqan siyaasadeedka iyo dhaqaalaha Shiinuhu. Inkasta oo ay Ethiopia muhiim u ahayd reer galbeedka haddana marna kuma aysan qanacsanayn aragtidooda ku wajahan Shiinaha. Shiinuhu waxa uu gacanta ku hayaa saddexda mashruuc ee ugu wayn ee ay Ethiopia leedahay oo kalana ah biya-xireenka Abay, ceelasha shidaalka iyo waddada xaddiidka. Shiinuhu waxa uu 2012 kii ka saaray Jabuuti Emaaraadka oo ah saaxiibka Maraykanka. Waxa uuna Jabuuti ka samaystay saldhigga kaliya ee uu ku leeyahay meel ka baxsan dhulkiisa. Arintaani waxa ay walwal ku abuurtay Maraykanka.
General Thomas Waldhauser Taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika waxa uu gudiga difaaca ee aqlka odayaasha ka hor sheegay walaaca ay ka qabaan saldhiga Shiinaha ee Jabuuti. Sidoo kalana warqad ay dhawaan senatorada kala ah James Inhofe iyo Martin Heinrich ay u direen lataliyaha xagga amaanka ee madaxwayne Trump John Bolton ayay ku yiraahdeen “Madaxwayne Geelle waxa uu iibsanayaa dalkiisa isaga oo ku gadanaya beeca ugu sareeya wiiqayana awoodda Maraykanka, marna ma dhici karto in saldhigga keliya ee joogtadaa ee aan Afrika ku leenahay aan kula darisno China oo tartan naga dhaxeeyo” Waxa aad oggaataa joogitaanka Shiinaha ee Jabuuti waxa qiimaha u yeelayaa waa xiriirkii Ethiopiyada boqolka milyana iyo marinka gacanka cadmeed oo saliida caalamku marto.
Sida ay aaminsan yihiin Indheer-garadka Tigreegu, Kolkii uu kacdoonkii Oromadu bilowday 2015 kii saaxiibadii hore oo Ethiopia waxa ay dhabarka u duween Ururkii TPLF si gobalka looga sooro xooggaga doolka ku yimid. Waana taas siyaasadda uu Abiy Ahmed fulinayaa Emaaraadkuna uu wakiilka ka yahay.
SOOMAALIYA: MA GARAN GUNTA SHAXDA EE WAA GAWAAN RAACDAY
Dawladda Soomaaliya ayaan iyadu meelna aan ka soo galin shaxdaan, maxaa wacay Emaaraadka oo ah darawalka shaxda ayaysan xiriir la lahayn. haddana nasiib daro goobta kama maqna. Laakiin hal ayay faa’iideen sida ay ku doodaan. Waxay la dhaceen martabad-sharafeed ay shaxdaan ka heleen, oo ah in maamul gobaleed yadooda ay Itoobiya ka xigsadaan. Taas ayaadna moodaa in Farmaajo oo aysan ka muuqan fahan iyo firfircooni siyaasadeed toona uu ku qancay.
Somaliland ayaa iyana u eg goob laga diga rogtay maxaa yeelay heshiiska Eritrea ayaad moodaa inuu Emaaraadka uga muhiimsanyahay boos celiska Berbera. Marka laga reebo saldhigga ciidammada.
Jabuuti ayaa ah dalka uu khasaaraha ugu badani ka soo gaarayo siyaasaddaan. Maxaa yeelay waxa ay bar-timaameed utahay siyaasadda Emaaraadka iyo Maraykanka ee Shiinaha ku aadan. waxa aad arkaysaa sida looga faquuqay wada xaajoodyada saddex geesoodkaa. horay ayuu u yiri Ahmed Ibn Saliim Madaxa Shirkadda Dubia World “anagaa Jabuuti dad ka dhignay waxaanse ku celinaynaa kobtii ay joogeen 2006 dii“.